Nagu saabsan - Qingdao TianHua Yihe Macdanta Macdanta
Qaybo ka mid ah Been Abuurista Birta
Been Sheega Birta
Been Abuurista Waajibaadka culus
Waxaan haysanaa in kabadan 20 sano oo ah soosaarida birta iyo khibrad soosaarid
Qingdao TianHua Yihe Macdanta Macdanta oo ku taal magaalada dekedda leh ee quruxda badan ee Qingdao, waxaan leenahay 20 sano oo waayo-aragnimo ah soo saarista alaabada been-abuurka. Waxaan bixinaa xalal been abuur bir ah oo caado ah iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, waxaa ka mid ah naqshadeynta naqshadeynta, sawir qaadista, wax soosaarka, xakamaynta tayada, warbixinnada, daabacaadda, baakadaha, rarka weelka iyo xalka gaarsiinta. Adeegyadeena ugu badan ee soosaarida birta waxaa ka mid ah birta xaashida iyo sameynta tuubada, waxaa ka mid ah goynta birta (miinshaar, leysar, olol, plasma), foorarsiga birta (xaashida laalaabka, tuubada / usha / qaybta foorarsiga, tuubada isku duuban), shaabad bir ah, sawir qoto dheer, CNC feer, alxanka iyo been-abuurka, isku imaatinka iyo dhammaystirka dusha sare.
Iyada oo injineero khibrad leh, shaqaale xirfad leh iyo qalab casri ah, alaabooyinkeennu waxay ku tiirsan yihiin tayadooda xasilloon iyo muuqaalka soo jiidashada leh ayaa lagu aqoonsaday suuqyada gudaha iyo dibaddaba. Intaa waxaa dheer, waxaan bixinnaa adeegga ODM / OEM oo macnaheedu yahay in alaabteenna loo qaabeyn karo iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Dhammaan qaybaha biraha ayaa si fiican uga iibinaya UK, Jarmalka, Talyaaniga, Norway, Griiga, Hindiya, Pakistan, USA, Kanada, Chile, Mexico, New Zealand, Australia iwm Macaamiisha sida Siemens, Coca Cola, PCORE, LAPP, FMC, JETWAY , EMD Technologies iwm
Ujeedada QDTHYH waa inay bixiso alaab bir ah oo la alifay iyo adeegyo qiimo tartan ah. Markaan tan dhammeyno, waxaan ula dhaqannaa macaamiisheenna, shaqaalaheenna iyo alaab-qeybiyeyaasha si cadaalad iyo sinnaan ku jirto. Hadafkeenu waa inaan dhisno aqoon isweydaarsi macmal ah oo caalami ah oo qalabaysan iyo maareyn, si loo xalliyo baahiyaha waraaqaha birta loo qaabeeyey.
Macaamiishayada, waxaan ku siineynaa adeegyo hal-joogsi ah sameynta birta caadada ah iyo saxnaanta birta culus. Adeegsiga qaab wada shaqeyn ah oo lagu fulinayo dhammaan baahiyaha kaladuwan ee macaamiisha. Dheeraad ah, waxaan ku dadaalnaa inaan noqono soo saare qiime jaban oo wax soo saar tayo leh iyadoo la ilaalinayo awooda aan uga jawaab celin karno suuqyada adag.
Shaqaalaheena, waxaan siineynaa jawi farxad leh oo abaalmarin leh si loo kiciyo barashada, wada shaqeynta iyo koritaanka shaqsiyadeed ee dhammaan shaqaalaha.
QDTHYH, waa inaan xaqiijinaa faa'iido macquul ah oo saamilayda, shaqaalaha iyo dib u maalgelinta mustaqbalka tartamida, si kor loogu qaado shirkadda waxay leedahay horumar ballaadhan iyo ballaarin.
QDTHYH Products & Mechine
Badeecadaha kaamil ah waxay ka yimaadaan wax soo saar qumman iyo qalab aan isticmaalno, tiro aad u badan oo qalabka wax lagu farsameeyo ah ayaa loo isticmaalaa sida mashiinada goynta Laser, mashiinada saxar jarista, Mashiinka feedhka ee NC, Mashiinka foorarsiga ee NC, mashiinka sameynta birta, qashin qubka Mashiinka iwm Intaa waxaa dheer, shaqaalaheena maamulka iyo shaqaalaheena waxay u furan yihiin inay sii wadaan hagaajinta si loo gaaro heerka ugu sareeya ee macaamiisha ku qanacsanaanta xirxirida, calaamadeynta, iyo gaarsiinta.Qaarkeena aqoonta sare leh ayaa had iyo jeer diyaar u ah inuu jawaab deg deg ah ka bixiyo dalabyada macaamiisha ee ku saabsan isgaarsiinta hufan , soo bandhigida dukumintiyada saxda ah, iyo bixinta waqtiga waqtiga oo dhan ah.
Ku adkeysashada mabaadi'da "Tayada ugu Fiican, Adeegga ugu Fiican", waxaan rajeyneynaa inaan dhisno xiriiro ganacsi oo muddo dheer ah adiga si aan uga wada faa'iidaysanno Macaamiisha adduunka oo idil marwalba waa lagu soo dhaweynayaa inay nala soo xiriiraan.
Mashiinka Xiirashada CNC
Bakhaarka Qalabka Caydhiin
TUULADA JINGKOU, DEGMADA CHENGYANG, QINGDAO CITY, CHINA